Gabar Dhalinyaro ah Si Farsameysan aan horey loo arag u Dishay Oday Dariskeeda ah - iftineducation.com
Gabar Dhalinyaro ah Si Farsameysan aan horey loo arag u Dishay Oday Dariskeeda ah
aadan21 / September 7, 2012
iftineducation.com – Gabar dhalinyaro ah oo ku nool Gobolka Siberia ee wadanka Ruushka ayaa si aan caadi aheyn oo farsamo casri ah waxey ku dishay nin Oday ah ay daris ahaayeen.
Sida ay qortay wakaalada wararka ee wadanka Ruushka ee RIA Novosti oo ah gabar 26 jir oo ku nool magaalada Buryatia ee gobolka Siberia ay la kulmi doonto xabsi 15 sano ah kadib markii lagu soo eedeeyay inay Rajastiinkeena ku dishay nin ay Daris ahaayeen oo da’diisa lagu sheegay 65jir.
Booliiska Magaalada Falku ka dhacay ayaa cadeeyay in gabadhaan dhalinyarada ah ay dishay ninka dariskeeda ah kadib markii uu diiday inuu siiyo lacag ay Qamri ku cabto ay ka dalbatay xili uu ku sugnaa gurigiisa.
Gabadha ayaa isku dayday iney ninkaan ay dariska ahaayeen ku qanciso inuu la haasaawo si ay lacag uga qaadato laakiin waa uu ka diiday waxeyna isku day’day iney soo qabato laakiin wuu ka baxsaday kadib waxey soo siibatay Rajastiinkeeda waxeyna uga soo qabatay qoorta .
Wararka ayaa sheegaya in gadhabaan dhalinyara ah markii ay rajastiinkeeda ay qoorta uga soo qabatay ay ku ceejisay ilaa uu ka dhinto, waxaana baaritaano ay booliska sameeyeen lagu ogaaday in gabdhan dhalinyarada ah ay dilka ninkaas odayga u adeegsatay Rajastiikeeda
Khiimeynta Khudbadaha ay jeediyeen 10-ka Musharax iyo Salaad Cali Jeelle oo Khudbadii ugu qosolka badneyd jeediyay (Daawo)